Sunday May 03, 2020 - 11:48:32 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Itoobiya ayaa markale sheegtay in ay gacanta ku dhigtay saanado hub ah oo is qarsoodi ah lagusoo geliyay gobollada wadankaasi.
Wasaaradda arrimaha gudaha Itoobiya waxay sheegtay in labadii bilood ee lasoo dhaafay ay qabteen kumanaan kun oo qoryo gacmeedyo ah iyo sanaadiiq rasaas ah, hubkaas ayaa si suuq madoow ah lagusoo geliyay wadanka.
Saraakiisha sirdoonka dowladda Xabashida Itoobiya ayaa tahriibinta hubka ee sida xowlliga ah ku socda ku tuhmaya xisbiyada mucaaradka oo doonaya in ay colaad abuuraan haddii ay ku guul darraystaan doorashooyinka dhici doona dabayaaqada sanadkan.
Gobollada Amhara,Oromia iyo Tigree ayaa ugu badan meelaha hubka lasoo geliyay halka gobollada Gambeella iyo Bishingul Gamaas ayaa isna saanado hub ah lagu qabtay, arrinta layaabka leh ayaa ah in hubka ugu badan lagasoo dajiyay garoonka diyaaradaha magaalada Addis Ababa kadibna lagu qabtay bar koontarool.
Dhinaca kale kooxo hubeysan ayaa weerar ku qaaday mid kamida Bankiyada ugu caansan wadanka Itoobiya, saraakiil boolis ayaa sheegay in afar ruux oo hubaysan ay weerareen Bangiga United Bank xaruntiisa magaalada Addis Ababa.
Kooxaha burcadda ah oo gacan ka helayay mid kamida waardiyaasha Bangiga ayaa si lama filaan ah ugu fashilmay in ay jabsadaan qasnadaha lacagta lagu keydiyo ee Bangiga kadib markii isku daygooda laga war helay.
Tan iyo markii uu Abiy Axmed noqday R/wasaaraha Itoobiya ayay falalka burcadnimo iyo khalalaasaha siyaasadeed kusii xoogeysanayeen inta badan gobollada wadankaasi ka koobanyahay.